AeroLeads: Tsvaga Anotarisira Email Kero neiyi Chrome Plugin | Martech Zone
Kunyangwe yakakura sei netiweki yako, zvinogara zvichiratidzika kuti haumbove nehukama hwakakodzera. Kunyanya paunenge uchishanda nemasangano makuru kwazvo. Kubata dhatabhesi kazhinji hakusi kwechinyakare - kunyanya sezvo mabhizimusi aine akakosha mushandirwi mutero.
Iko kugona kwekutarisa kumusoro kwekubata ruzivo mune chaiyo-nguva kubva kune yakasimba sosi yakakosha kune ako anobuda ekutsvaga kutsvaga kuedza. Aeroleads sevhisi ine inoenderana neChannel Plugin iyo inogonesa yako timu yekutengesa kuti iite izvo chete.
AeroLeads inobvumidza vanobuda kunze kwevatengesi kuti vatsvage vanobatika nekambani kana kuburikidza neChannel yavo plugin - tora yavo yekuonana ruzivo irimo mukati me database yavo uye inoenderana nehukama hwehukama iwe hwauri kutarisa.
Kushandisa iyo Aeroleads Chrome Kuwedzeredza kuri nyore:
kuisa Chrome extension, shandisa, uye tsvaga paAeroLeads, Google, LinkedIn, Crunchbase, AngelList, nezvimwe.
Sarudza Relevant Prospects uye wovaendesa kuAeroLeads mune ramangwana rinotarisirwa.
AeroLeads inotora zvese ruzivo rwebhizinesi kana munhu anosanganisira Email, Zita, Nhare Yenhare, uye nhoroondo dzevanhu.
Iwe unogona kunyange kutumira rondedzero kune yekunze CRM kana iwe uchida kuvaka kunze kwekutarisira rondedzero ipapo. Ruzivo rwekutaurirana rwunopihwa pamadhora 0.50 pachinyorwa. Unogona kuyedza iyo plugin ine gumi emahara makiredhi.
Aeroleads Tungamira Kubatanidzwa
Aeroleads yakagadzira zvibatanidzwa kusundira ruzivo rwekuonana zvakananga muaccount yako kana mune mamwe maturusi, kusanganisira Mailchimp, Salesforce, Insightly, Pipedrive, Zapier, Zoho, Hubspot, uye FreshSales.
Kuzivisa: Isu takanyoreswa ne AeroLeads uye tiri kushandisa yedu yakabatana link mune bhatani riri pamusoro.
Tags: aeroleadsAPItenga data rekutauriranatenga tarisiro marekodhichrome extensionchrome pluginkuonana mazitatsvaga ruzivo rwekuonanaFreshsalestora ruzivo rwekuonanahubspotInsightlyrondedzero apimailchimpkubudaPipedrivetarisiro runyorwasalesforcezapierZoho